AmaGuavas ngokuvamile adliwa aluhlaza, ngokuvamile asikwa emikhawulweni noma adliwe njenge-apula. Izithelo ezintsha zivame ukufakwa kumasaladi ezithelo noma zikhonzwe noshukela no-ukhilimu njenge-dessert. Ama-Guavas nawo adliwa ngesipin kasawoti kanye nopelepisi futhi akha isisekelo seminye imifino ebusayo. Njengoba izithelo zinezinga eliphakeme le-pectin, ama-guavas asetshenziswa kabanzi ukwenza ama-candies, ukulondolozwa, ama-jellies kanye nama-jams. Ama-Guavas nawo acutshungulwa ukuze kwenziwe i-juicing, ukuwafaka noma ukomisa.
Ukukhiqizwa Emhlabeni Jikelele
I-India ingumkhiqizi omkhulu wama-guavas wamazwe omhlaba futhi ikhiqiza cishe ama-40% omthamo womhlaba. Lokhu kulandelwa ngamavolumu yi-China, Thailand, Pakistan, Mexico, Indonesia ne-Bangladesh.
Ukukhiqizwa KwaseNingizimu Afrika
AmaGuavas wethulwa eSifundazweni saseNingizimu Afrika saseWestern Cape kusuka eMadeira. Ingadi yezithelo yokuqala ye-guava yatshalwa ePaarl ngo-1890, nguFanan Retief. Izindawo ezinkulu kakhulu zokukhiqiza i-guava eNingizimu Afrika ziseNtshonalanga Kapa, ​​eMpumalanga, ezifundazweni zaseLimpopo.
ENingizimu Afrika, ama-guavas ayekhiqizwa ikakhulukazi embonini yokugaya izithelo kepha ngokuqhubeka kwesikhathi ukusetshenziswa okusha, ijusi, ujamu nokomiswa sekugqame kakhulu. I-Western Cape ibone ukuvuselelwa kwezokukhiqizwa kwe-guava, okuqhutshwa yizimboni ezi-canning and juicing.
Iningi lama-guavas akhiqizwa eNtshonalanga Kapa asetshenziselwa ukucubungula futhi cishe ingxenye yalokhu kukhiqizwa yathunyelwa kwamanye amazwe ngohlobo lwe-purée. Ama-guavas amasha aseNingizimu Afrika awathunyelwa kwamanye amazwe ngenxa yempilo yamashalofu nezinselelo zephytosanitary, kodwa inani elikhulu lemikhiqizo ye-guava esetshenzisiwe ithunyelwa ngaphandle njalo ngonyaka.
Ithebula: Inhlangano Yabatshali BeGuava YaseNingizimu Afrika
Ama-guavas asanda kutholakala athengiswa kalula eNingizimu Afrika yonke phakathi nezinyanga zasebusika phakathi kuka-Ephreli noSepthemba.
Ama-guavas avuthiwe asezingeni ayavunwa bese ahanjiswa ku-cannery lapho ahlelwa khona, enesikhumba futhi ekheniwe. Ama-guavas ahleliwe asetshenziswa njenge-dessert, ekubhaka nakuma-saladi futhi lokhu okuthengiswayo kuyindlela ebalulekile yokuthumela impahla ngaphandle kweNingizimu Afrika.
Donsa futhi ugxile
Inani elikhulu lama -arava livunwa bese lidonswa noma lenziwe ligxile ekusetshenzisweni kwejusi ekusetshenzisweni kwasekhaya nakwamanye amazwe.
I-Guava Juice nezithelo zihlangana
Ijusi le-guava elihlanzekile liyindlela ethandwa ngabathengi. Amandla we-flavour ye-guava futhi enza ukuthi ilungele ukuhlanganiswa kwezithelo namanye amajusi wezithelo.
Izithelo ezomile futhi ezinoshukela, izikwele ezi-dainty guava nemisakazo kuyizenzo ezithandwayo.